बडीगार्डको बेइज्जत ! « Ramailo छ
बडीगार्डको बेइज्जत !
सामान्यतः बडीगार्ड के का लागि प्रयोग गरिएला ? सार्वजनिक ठाउँमा हुन सक्ने खतरा र सुरक्षाको लागि बडीगार्ड राख्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका नायक कहलिएका र भनिएकाहरु भने देखाउनकै लागि कार्यक्रममा बडीगार्ड राखेर पुग्न थालेका छन् ।
फिल्म ‘ड्रिम्स’ रिलिज हुँदा नायक अनमोल केसी बडीगार्ड सहित हल पुगेका थिए । दर्शकको भिडमा युवा स्टार पुग्दा बडीगार्ड लैजानु स्वभाविक मानिएपनि फिल्म ‘लिलिबिली’ को प्रेसमिटमा नायक प्रदीप खड्काले बडीगार्ड लैजाँदा चर्चा र आलोचना चर्को भएको थियो ।
प्रदीप पछि आफ्नै लगानीमा फिल्म हेप्पी न्यू ईयर बनाएको कलाकार कुशल थापाले आफ्नै शहर पोखराको कार्यक्रममा बडीगार्ड लिएर उपस्थित भएका छन् । गत शुक्रबार पोखरामा भएको स्ट्रिट कन्सर्टमा ६ जना बडीगार्ड सहित कुशल कार्यक्रममा पुग्दा माहोल हाँस्यास्पद देखिएको थियो । मिडियालाई उपलब्ध गराइएको तस्बिरमा कुशललाई बडीगार्डको कुनै खाँचो नभएको प्रष्ट देखिन्छ । उनले केवल मिडिया कभरेजका लागि मात्रै आफ्नो पछाडी ६ जना युवा राखेका हुन् । यस्ता फन्डाले मिडिया कभरेज होला, दर्शकको ध्यान पनि केही हदसम्म तानिएला । तर के नेपाली फिल्म र कलाकारलाई आम दर्शकले हेर्ने नजर सकारात्मक होला ?
बिना कारण बडीगार्ड पछि लगाउनु र प्रेसमिटमै विकिनी गर्ल प्रस्तुत गर्नु जस्ता पछिल्ला फिल्कर्मीको हरकतले फिल्म र कलाकारप्रति दर्शकको सोच नकारात्मक हुँदै गएको एक फिल्मकर्मी बताउँछन् । ‘यस्ता सस्ता हरकतले दर्शक भाँडिने पक्का छ’, ती फिल्मकर्मी भन्छन्, ‘यसैले हर्कत गर्न छोडेर फिल्म पो राम्रो बनाउनतिर लाग्ने पो हो कि !’